musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » Slovenia Kuvhuna Nhau » Slovenia yakatanga kuve guta idzva rekushanya kweEurope
Kufamba kwekushanya • Airlines • nhandare yendege • avhiyesheni • Kuputsa Nhau dzeEurope • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • Culinary • tsika nemagariro • Hospitality Industry • Hotera & Resorts • nhau • vanhu • Resorts • Kutarisirwa • chengetedzo • Slovenia Kuvhuna Nhau • ushanyi • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau • Trending Now
Slovenia yakatanga kuve guta idzva rekushanya kweEurope.
Slovenian Tourist Board ichangoburwa mushandirapamwe waunza kwainoenda kuhupenyu nekutarisisa kushanya kwekushanya, runako rwechisikigo uye mapaki enyika.
27% yevakabvunzwa muongororo vakati vanowanzo bhuroka mazororo.
'Adventure and sports' ndiyo yechishanu inonyanya kufarirwa mhando yezororo, uye ine resonance chaiyo nevashanyi vekare vekuSlovenia: maCzech nemaDutch.
Vashanyi vazhinji varikushuvira nzvimbo dzakavhurika, dzakasvibira mushure memwedzi vari kumba.
Yakurudzirwa nemushandirapamwe wayo wenguva pfupi yapfuura wekushanya kwepasirese wakanangana nekushanya kwekushanya, Slovenia inotarisirwa kuona kushanya kwemukati kuchikwira kusvika 5.7 miriyoni vanosvika panosvika 2024, kuwedzera kwe22% padanho rekutanga denda.
Zvinoenderana nevanoongorora indasitiri yekufambisa, 'adventure and sport' imhando yechishanu inonyanya kufarirwa yezororo, uye ine resonance nevashanyi vekare vekuSlovenia: maCzech nemaDutch.
Sirovhinyiya imusha kune dzimwe nzvimbo dzinoshamisa kwazvo muEurope asi zvinoshamisa kupfuura vashanyi vazhinji. Zvisinei, the Chislovenia VashanyiMushandirapamwe wazvino uno waunza kwaunoenda kuhupenyu nekutarisa kushanya kwekushanya, runako rwechisikigo uye mapaki enyika.
Muongororo ichangoburwa yeindasitiri, 27% yevakapindura vakati vanowanzo bhuroka zororo rekushanya. Adventure tourism yakaratidzawo kuwanda mune dzimwe SirovhinyiyaMisika yakakosha yemisika yakaita seCzech Republic neNetherlands, ine 40% uye 32% yevakapindura vachicherechedza kuti iyi ndiyo mhando yezororo ravanowanzo bhuka.
Nguva yemushandirapamwe wekushambadzira weSlovenia yakanaka. Vashanyi vazhinji varikushuvira nzvimbo dzakavhurika, dzakasvibira mushure memwedzi vari kumba. Pent-up yekuda kwekufamba-famba ichaona kushanya kwenyika dzese kupora nekukurumidza mukati Sirovhinyiya kupfuura dzimwe nzvimbo muEurope.